ကျော်ထက်ဝင်း (နည်းပညာ): Blog တွင် Home Page Begib လုပ်နည်း
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဘားအံကနေ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျား..။ ဒီwebsite လေးထောင်ကိုရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော်ချစ်သော သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဆက်အသွယ်မပျက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထောင်ရခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်...။သူငယ်ချင်းတို့ နေကောင်းကြရဲ့လား ..။ကျွန်တော်ကတော့ ၂၀၁၀-၂၀၁၁မှာ ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့ နောက်ဆုံးဝေးကွာသွားခဲ့ပါပြီ။သူငယ်ချင်းအားလုံးကို သတိရခြင်းများစွာဖြင့် ...(ကျော်ထက်ဝင်း-နည်းပညာ-ဘားအံ) G-Mail/G-Talk Account များလဲ အခမဲ့ ဖွင့်ပေးနေပါတယ်ဗျား..။
နည်းပညာ ဘားအံ ၁
နည်းပညာ ဘားအံ ၂
နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ မှ လှိုက်လှဲစွား ကြိုဆိုပါတယ်ဗျား .... ။
Blog တွင် Home Page Begib လုပ်နည်း
ကျွန်တော်တို့ မိမိတို့ Blog ကို ၀င်တဲ့ အခါမှာ Home Page Logo ပုံလေးနဲ့ ပေါ်အောင် လုပ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ ပုံပေါ်မှာ မိမိ Link ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြော်ငြာချင်လို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာ ၀င်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ Home Page မိမိစိတ်ကြိုက် ပုံနဲ့ မိမိစိတ်ကြိုက်
ကြော်ငြာ Link တွေ ချိတ်နိုင်ပါတယ်။ (အမှားရှိရင် ပြင်နိုင်အောင် မိမိ Blog ကို Back up ပြုလုပ်ထားပါ)မှတ်ချက်။ ။အခုပြန်ဖြုတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်တယ် ပြောလို့ပါ။Step#11.မိမိ Blog မှ Layout ကို click လိုက်ပါ။2.Edit
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သမိုင်းများ စုစည်းမှုတောင်တွင်းကြီး သမိုင်းBAT File Format Lesson PLC အကြောင်းအခြေခံ PLC Function များMotor အကြောင်းAC Induction Motor အကြောင်းACMV အကြောင်းVAV အကြောင်းHVAC အကြောင်းHeat Exchanger အကြောင်းPump အကြောင်းChiller / Chilling အကြောင်းElectrical Installation အကြောင်းClean Water & Clean AirM&E Auto CAD ( Singapore )Fire Protection အကြောင်းData Communication & Networking အကြောင်းDreamWave Exercise
အထွေထွေ Link များ
ကြက်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံHTMLလေ့လာချင်ရင်Website ထောင်ချင်ရင်သတင်းများ-၂သတင်းများအမှတ်တရ Video မှတ်တမ်း-၂အမှတ်တရ Video မှတ်တမ်းအကောင်းဆုံးဆိုဒ်ဓာတ်ပုံတင်ရန် အကောင်းဆုံးအမှတ်တရ မှတ်တမ်းများနည်းပညာဗဟုသုတဆိုဒ်-၂နည်းပညာဗဟုသုတဆိုဒ်-၁အထွေထွေWEBSနည်းပညာ-ဘားအံအမှတ်တရလေးများနည်းပညာများ
တင်ခဲ့သော Post လေးများ
Blog နည်းပညာရပ် အထွေထွေComputer & Internet E-Mail နည်းပညာရပ်များဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အမှတ်တရ မိန့် ခွန်းများကျန်းမာရေး အကြောင်း သိကောင်းစရာBlogspot အလွယ်ကူဆုံး ထူထောင်နည်းWordpress Website ထူထောင်နည်းစိတ်ပညာရပ် နှင့် ကျင့်စဉ်ဗိုလ်ချုပါအောင်ဆန်းအကြောင်း စုစည်းမှုfacebook cartoon စုစည်းမှုComputer & Internet Email
ကျော်ထက်ဝင်း. Picture Window template. Template images by Nikada. Powered by Blogger.